Christina Lugnet oo shaqadii laga ceyriyay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Christina Lugnet oo shaqadii laga ceyriyay
La daabacay måndag 6 augusti 2012 kl 16.13
Christina Lugnet, agaasimaha shaqada laga ceyriyay .
Sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay waaxda manaafacaadka waxaa shaqadaii laga eryay agaasimaha guud ee hay'ada kobaca Christina Lugnet ee dhowaantan loo soo jeediyay edeymo ah ku takri falid lacag.
Christina Lugnet ayaa si ba'an loogu dhaliilay qarashaad lagu bixiyay xaflado raaxo ah iyo shirar loo qabtay shaqaalaha hay'ada ay madaxda ka aheyd ka dib markii uu sidaasi kashifay wargeyska maalin laha ah ee DN.
Haweeneydan ayaa laga dhigay agaasimaha guud ee hay'ada kobaca 1-dii bishii April ee sanadkii 2009-ka, iyada oo howshaasi ay kala wareegtay hay'ada horumarinta iyo hay'ad iyadana la oran jiray horumarinta miyiga iyada oo labadaasi hay'adoodba la xiray oo la baabi'iyay.
Christina Lugnet ayaa ku nool degmada Haparanda waxayna muddo shan sano ah soo heysay xilka hoggaaminta maamulka degmadaasi.
Waxy la nooshahay nin ay nolosha wadaagaan iyada oo dhashay labo caruur oo qaan gaar ah.